Anyị Kwadoro na Onye Ọdee Akwụkwọ Njikọ rụpụtara na 484% Ogologo Pịa-Site Ọnụego | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 22, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Y’oburu na onye nkwusa, onye oru SEO ma obu CMS n’elu ikpo okwu, ikwesiri imejuputa usoro kwupụtara nwe. Onye edemede anọwo gburugburu ọnwa ole na ole wee gafee ụfọdụ ịmezi ihe, na-eweta nnukwu atụmatụ nke na-eme ka ọhụhụ ngwa nchọta gị n'ezie.
N'ezie, M ga-ajụ ụlọ ọrụ SEO ọ bụla na-adịghị akpali ndị ahịa ha iji hụ na ha mezuru nke a. Edere m banyere ikike nwegasịrị na otu esi eme ya mejuputa snippets bara uba na WordPress. Ọ dịghị mfe dịka idobe ngwa mgbakwunye (mana), mana ọ dị mkpa.
N'ihi gịnị? Google emechaala nyere data iji gosipụta otu ọfụma iji gosipụta onyonyo onye edemede gị egosipụtara na nsonaazụ ọchụchọ N'ime Njikwa Nchọta Google, enwere ugbu a ngalaba na Labs raara nye na nsuso peeji ndị edere ederede gị:
N'ime Martech, enwere 484% dị iche na pịa-site na ọnụọgụ na njikọ ndị ode akwụkwọ anyị gosipụtara na peeji Nsonaazụ Nchọgharị (SERPs) karịa na ibe anyị ndị ọzọ. Nke ahụ pụtara na ndị folks fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge 5 dị ka ọ nwere ike ịpị njikọ anyị na foto onye edemede karịa njikọ na-enweghị ya na SERP.
Y’oburu na onye mbiputa akwukwo ma imetaghi ya rel = onye edemede, rel = m na njikọ ndị nkwusa, ịkwesịrị ime ya ozugbo. Y’oburu na ibu SEO ọkachamara, ikwesiri ikwusi ndi ahia gi nile mejuputa azịza a. Y’oburu na ibu CMS, nka gha aghaghi ime.
Mee ya. Ugbu a.
Tags: ndị webmasters googlegoogle +nkwusarel edemedekpọlitere mrel = onye edemederel = muwebmasters
Ecosystem nke ahịa na -abata
Dec 22, 2011 na 3:57 PM
Edere m usoro site na ntinye iji mejuputa "rel = author" na ndị ọrụ WordPress m na-achọta na-enye aka. Nwere ike ịchọta nkuzi ahụ ebe a:
Ọ na-egosi gị otu esi eme ya site na iji ntụzịaka ọhụụ nke Google - yabụ usoro dị mfe. Ntọala 484% nke ọkwa dị mma site na ọnụego nwere ike ghara ịsụgharị nye onye ọ bụla ozugbo, dịka o yiri ka ị ga-achọ ntakịrị mmekọrịta mmekọrịta Klout ma ọ bụrụ na onyonyo ndị edemede ga-egosi (opekata mpe ugbu a). Ma nke ahụ ma ọ bụ na ihe oyiyi ahụ erubeghị ebe niile. Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara biko gwa.
Dec 22, 2011 na 4:15 PM
Daalụ Elizabeth! Anyị ahụla ụfọdụ adịghị mma na ngosipụta nke onyonyo na peeji Nchọta Ngini Nchọgharị. Ka Google na-aga n'ihu na-emeziwanye ode akwụkwọ ma na-ewepụta nkwalite ndị ọzọ, amaara m na anyị ga-eme mgbanwe ole na ole ebe a na ebe ahụ!
Feb 28, 2012 na 10:21 PM
Ihe oyiyi m malitere igosi n'ikpeazụ. Were oge. Anyị etinyegoro ngwa mgbakwunye WordPress iji nyere aka mee akara edemede. Biko lee ihe ị chere - akpọrọ ya AuthorSure ma enwere ike ibudata ya na WordPress.
Feb 28, 2012 na 10:46 PM
Ezigbo jụụ, Elizabeth! Echere m echiche ide ihe mana nke a zuru oke karịa ihe m na-eme atụmatụ. Daalụ maka ịkọrọ anyị ya!
Feb 21, 2012 na 6:59 PM
Ahụrụ m mmụba 38% na pịa m site na exercisesandworkouts.com na ọtụtụ ndị nwere obi abụọ. Ma nọmba anaghị agha ụgha!
Mee 18, 2012 na 2: 58 PM
Hmmn, ezigbo ọgụgụ, ma ọ bụghị ihe ijuanya, mana anyị enweghị "Onye edemede Stats" na ngwaọrụ webmaster anyị, agbanyeghị na anyị enyochaala onye dere ya.